Version 0.6.4 – Skredder The ma sii caga
October 14, 2010 by dalabyo 2 Comments
Matt iyo Me
Markan waxaan ku biiray by nikaax badan Matt Mullenweg, abuuraha boosteejo WordPress-ka.
In socda wareysiga gebi ahaanba been, Matt naga caawin doonaan dhammaan fahmaan waxa cusub ee 0.6.4:
Waydiiyaa: Hello Matt, sidee tahay maanta?
Matt: Aan weligey sidaas faraxsan oo ku saabsan dhibic 0.01 release of plugin ah ka hor inta!
Waydiiyaa: Waa maxay sababta in?
Matt: Waxaan u maleynayaa in aad ugu dambeyn la helo ruuxa wordpress in la sii daayo this
Waydiiyaa: Anigu waxaan ahay?
Matt: Haa, ugu dambaynta laguu iskudhafka la boosteejo halkii jabsigii ku wareegsan, Aad ayaan u jeclahay, xaqiiqda ah in aad ugu dambeyntii ka qaaday waqtiga iyo sameeyey aad interface plugin iyo maamulka pages translatable, iyo tan iyo aad ku fiican tahay in, waxaad ka heli blog a free!
Waydiiyaa: Sii, mahad! hadda sida aan dad kale oo ka heli doonaa si loo sameeyo ku turjuman aan plugin?
Matt: Weydii kaliya isticmaala si aad u sameeyo in, Hubi in aad iyaga siin doontaa credit aan ahay.
Waydiiyaa: U sheeg oo wax dhan oo ku saabsan poedit iyo walax?
Matt: Kaalay on, sida aan ahay mar walba leh, halkaas plugin a for in! Waana in aad malaha ogahay tan iyo aad u tarjumay naftaada iyo ka qayb qaatay qaar ka mid ah Ciidamada Kumandoska yaryar.
Waydiiyaa: Waxaad macnaheedu codestyling Dhanka?
Matt: Haa, in mid ka mid ah, qof kasta u isticmaali karaan. Laakiin aan su'aal ka kuu
Matt: Haa, sababta ma waxaad isticmaali Transposh ee lagu sameeyo in?
Waydiiyaa: Sow ma aha runtii arki sababta, sida ay jiraan horeba plugin weyn u for, sababta faa'ideysan?
Matt: Waxaan u aragnaa in aad ugu dambeyntii waxaa loo helo.
Waydiiyaa: Helitaanka waxa?
Matt: Oo ruuxa of wordpress, wadaagaya, oo daryeel, source u furan, iyo jacaylka free.
Waydiiyaa: Waxaan hubaa in aan sidaas rajaynaynaa, aad baad u mahadsan tahay sida isagoo nala.
Matt: Waad ku mahadsan tahay, marka xigta, fadlan ii wareystaan ​​on muujinta weyn ka, haddii aan lahaa inay sameeyaan waraysiyo been for release kasta plugin yar yar ee wordpress, Marnaba doontaa waqti lacag la'aan ah si dhab hagaajiyo wordpress iyo yimaadaan si ay wordcamps.
Waydiiyaa: Qaadan doonaa ogeysiis, thanks mar!
Well, thanks Matt for nagu soo biirin, Tilmaamo qaar ka mid ah ayaa sidoo kale ku daray in ay version tani waa tarjumaadda Laatiin daray (weheliso tarjumaad taageero google), saddex luqadood cusub ku daray in ay Bing turjumi. Awoodda si aad is-dhexgalka bulshada ee gettext halkaas oo uu dhibaato u keeno, qaba qaar ka mid ah Ciidamada Kumandoska kale.
Sida had iyo jeer – waxaan rajaynayaa in aad ku raaxaysan doonaa version this
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: Bing (msn) turjumaan, wareysiyo been, gettext, google turjumi, Matt mullenweg, yaryar, luqado badan oo, sii daayo